Imveliso yeToyota, abaxhasi - iToyota yaseToyota abavelisi
Umgangatho ophezulu wecrankshaft yemoto yeToyota2RZ
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: iToyota2RZ
Umsebenzi we-crankshaft counterweight (ekwabizwa ngokuba yi-counterweight) kukulinganisa amandla e-centrifugal ajikelezayo kunye ne-torque yayo, kwaye ngamanye amaxesha inokulinganisa amandla e-inertial kunye ne-torque yayo. Xa le mikhosi kunye namaxesha elungelelaniswe ngokwawo, i-counterweight inokusetyenziselwa ukunciphisa umthwalo kwinto ephambili. Inani, ubungakanani kunye nokubekwa kwe-counterweight kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokwezinto ezinje ngenani leesilinda ze-injini, ulungiselelo lweesilinda kunye nemilo yecrankshaft. I-counterweight ngokubanzi idityaniswa ne-crankshaft ngokujula okanye nangokwenza. Injini ye-diesel yokulwa namandla aphezulu yenziwa ngokwahlukeneyo kwi-crankshaft emva koko yadityaniswa kunye.
Umgangatho ophezulu wecrankshaft yemoto, efanelekileyo iToyota 2RZ, umgangatho wokuqala wefektri, iwaranti yonyaka omnye. Inkqubo efanelekileyo yokuthengisa emva kokuthengisa iya kukunika inkxaso yobuchwephesha. Wamkelekile abathengi basekhaya nabangaphandle ukubuza nokutyelela umzi-mveliso wethu.
Imoto esemgangathweni eyenziwe ngerhrutshi yeToyota1Y
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: Toyota1Y
I-ductile yentsimbi yentsimbi ejikelezayo yekona yokuqinisa ukomeleza iya kusetyenziswa ngokubanzi kulungelelwaniso lomngxunya. Ukongeza, iinkqubo zokomeleza ikhonkrithi ezinje ngokujikeleza ukomeleza ukuqiniswa kunye nokucinywa komphezulu wejenali kuya kusetyenziswa kakhulu ekusetyenzisweni kwecrankshaft. Iindlela zokomeleza i-crankshaft zentsimbi ziya kuba ngaphezulu Umhlaba uyacinywa ngejenali kunye neekona ezijikeleziweyo.
Inkampani iye yaqhubela phambili ubuchwepheshe kunye nohlalutyo olupheleleyo kunye nezixhobo zovavanyo. Okokuqala kolu shishino lokupasa i-ISO9001-2000 kunye ne-TS16949: isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni ka-2009. Izinto ezikhoyo ezisisigxina zii-yuan ezili-150. Ngoku imigca imveliso machining. Inkqubo yokuvelisa kunye neendlela zokuvavanya zilandela ngokungqongqo imigangatho yaseJamani.
Ukugqwesa kwi-crankshaft yeToyota1FZ
Iimodeli zemoto ezifanelekileyo: iToyota1FZ
I-crankshaft yenye yezona ndawo zibalulekileyo nezibalulekileyo zenjini. Umsebenzi wayo kukuguqula uxinzelelo lwegesi oludluliswa yicrankshaft yokuqhagamshela intonga kwi-torque, esetyenziswa njengamandla okuphuma komsebenzi, ukuqhuba ezinye iindlela zokusebenza, kunye nokuqhuba izixhobo ezincedisayo zenjini yomlilo yangaphakathi ukuba isebenze. Oku kuthetha ukukhawuleziswa kobundlobongela kunye nokushenxiswa, kuhamba kunye nokuguqa okuphezulu, torque ephezulu kunye nefuthe lokungcangcazela, okukhokelela kuxinzelelo oluphezulu kakhulu nolwahlukileyo. Uxinzelelo olugqithisileyo lufuna uyilo ngononophelo kunye nokubala, ukhetho lwezixhobo ezifanelekileyo kunye netekhnoloji yokulungisa ibhetshi.
Kwimiqolo yeentsimbi eziveliswe ngobuninzi, ukuze kuphuculwe umgangatho wemveliso, umgca we-nitrogen osekwe kumoya ovelisa imveliso ye-nitrocarburizing oya kwamkelwa kwikamva. Umgca wemveliso ye-nitrojiburizing esekwe kwi-nitrojeni yenziwe ngomatshini wangaphambili wokuhlamba (ukuhlamba kunye nokomisa), ubushushu besithando somlilo, isithando somlilo se-nitrocarburizing, itanki yeoyile epholileyo, umatshini wokuhlamba ngasemva (ukuhlamba kunye nokomisa), inkqubo yolawulo kunye nokusasazwa kwegesi kunye nezinye iinkqubo.
Ukusukela oko yasekwa, inkampani ibambelela kumgaqo-nkqubo woshishino "wokuqinisekisa umgangatho, ukusekwa ngokwedumela, inkonzo enyanisekileyo, kunye nokuxhamla", kwaye izinikele ekufuneni uphuhliso kunye nenkqubela phambili kubathengi bethu, kwaye sibulela ngokungazenzisiyo kubahlobo bazo zonke iindawo yobomi abanenkxaso yexesha elide kunye nenkathalo malunga nenkampani!